प्रधानमन्त्री देउवा र बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारबीच के कुरा भए ? – Etajakhabar
प्रधानमन्त्री देउवा र बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारबीच के कुरा भए ?
बिहार । भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शनिबार साँझ बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले शिष्टाचार भेट गरे ।
प्रधानमन्त्री देउवासँग बिहारको रोयल रेसिडेन्सी होटलमा मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले शनिबार साँझ भेटवार्ता गरेका हुन । भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा शनिबार साँझ आन्ध्र प्रदेशबाट बिहार आइपुगेका हुन ।
सो भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र मुख्यमन्त्री नितिश कुमारबीच हालै नेपालको तराई र बिहारका कतिपय सीमा क्षेत्रहरुमा बाढीका कारण भएको क्षतिका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । नेपाल र भारततर्फ बाढीले पु-याएको क्षति र बाढी नियन्त्रणका लागि दुवै देशका तर्फबाट संयुक्त रुपमा दिगो व्यवस्थापनको पहल गर्नुपर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री देउवाले जोड दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीले जानकारी दिए ।
सो वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले हालै भारतसँग गरेका ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा सहजीकरण गरिदिएकामा मुख्यमन्त्री नितिश कुमारलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
भेटवार्तामा सहभागी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले दिएको जानकारी अनुसार भारतको पटना र नेपालको काठमाडौँमा पानी व्यवस्थापनको छुट्टाछुट्टै सम्मेलन गर्ने सहमति भएको छ । ती सम्मेलनमा नेपाल तथा भारत सरकारका जलस्रोतसम्बन्धी विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीको सहभागिता हुनेछ ।
भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवा, पर्यटन मन्त्री देव, परराष्ट्र सचिव वैरागी, भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवा उनको सम्मानमा मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सरिक भए ।
प्रधानमन्त्री देउवा आइतबार बिहारको बोधगयामा रहेको महाबोधी जाने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा आइतबार साँझ बिहारबाट नयाँदिल्ली हुँदै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र ११, २०७४ समय: ८:४९:३६